Isan’ny ifotoran’ny tetik’asan’izy ireo amin’ity taona ity kosa ny fanomezana fitafiana ho an’ireo tsy manana, fizarana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy sahirana, fanampiana ireo ray aman-dreny amin’ny fampidirana ny zanany any an-tsekoly, fanokafana trano famakiam-boky amin’ireo sekoly any ambanivohitra, sns. Izany indrindra no antony hikarakaran’izy ireo ity hetsika fanangonana fanampiana ity. Ny sabotsy 30 sy alahady 31 martsa ho avy izao moa no ho tanterahina etsy amin’ny EPP Manjakaray izany. Hanomboka amin’ny 9ora maraina kosa ny fandraisana ireo fanampiana ka hifarana amin’ny 4ora sasany hariva. Isan’ny andrasan’izy ireo amin’izany kosa ny akanjo, ny kilalao, ny fitaovam-pianarana, ny boky, sns. Izany rehetra izany dia ho zaraina amin’ireo ankizy sahirana sy tena mila izany aorian’ity hetsika ity. Foto-kevitra hijoroan’ny fikambanana moa ny hoe : tsy voatery hanana ny ampy izay vao afaka manampy ny hafa.